Ukushicilela ubuNtu: Indlela yokubhala malunga nam iphepha | Martech Zone
Ukushicilela ubuNtu: Indlela yokubhala malunga nam iphepha
NgoLwesibini, Aprili 19, 2016 Douglas Karr
UAndrew Wise ubhale inqaku elinzulu ngokwenene kwi Eyona ndlela yokuGqibela yokuKhokela ekwakheni malunga naM iphepha Kuya kufuneka uyokujonga ngokweenkcukacha. Kunye nenqaku, uphuhlise i-infographic esabelana ngayo ngezantsi egubungela ithoni kunye nelizwi, iingxelo zokuvula, ubuntu, abaphulaphuli ekujoliswe kubo kunye nezinye iimfuno.
Ndiyathanda ukongeza iisenti zam ezi-2 kwezi zinto, ke ngoku iya. Ndingakukhuthaza ngokwenene njengeshishini okanye njengomntu ozimeleyo, ukuba uye kude ngaphandle kwendawo yakho yokuthuthuzela. Ndiyazi abantu abaninzi kakhulu abangakuthandiyo ukuzithetha, abathandi iifoto zabo, kwaye bayazidelela iividiyo okanye iaudio yabo. Mhlawumbi bakholelwa ukuba olu qheliselo luyinto ethandabuzekayo. Ndihlala ndibona amazwi anje kumajelo asekuhlaleni.
Nantsi impendulo yam: Iphepha lakho malunga nam alikho kuwe!
Iiselfie, iividiyo ezithethayo, iifoto zobuchwephesha, kunye neenkcazo zakho zezabaphulaphuli bakho. Ukuba ungumntu omangalisayo kwaye uthobeke kakhulu… wakho Ngam iphepha kufuneka libonakalise oko. Ewe, kuvakala kuyinto engaqhelekanga ukwazisa wonke umntu ukuba uthobekile. Kodwa ukuba uthobekile, uza kwazi njani umntu? Ngaba uza kulinda ulinde ukudibana nomntu ngamnye ukuze babone ukuthobeka kwakho? Okanye ulinde abanye ukuba bathethe ekuthobekeni kwakho? Ayizukwenzeka.
Ukuba injongo yakho kukwakha igunya kunye nobunkokeli kwindawo yakho, oyena umahluko wakho ubalaseleyo nguwe. Ayisiyomfundo yakho leyo, imbali yakho yomsebenzi, nguwe! Kukuvumela wonke umntu ukuba azi ukuba kutheni kufuneka basebenze nawe. Abantu bayathanda ukusebenza nabantu abafuna ukusebenza nabo. Izigqibo zokuthenga zihlala zinemvakalelo kwaye isigqibo sixhomekeke ekubeni ithemba lakho likuthembe kangakanani kwaye likuchaze njengegunya kubugcisa bakho.
Ukubonelela bobabini abasebenzisi beinjini yokukhangela kunye nabatyeleli besiza ngayo yonke imigca abayifunayo- iintetho ozenzileyo, iinkokheli onxulumana nazo, iincwadi ozibhalileyo, kunye nomyalezo obabhalela bona kubalulekile.
Icala elisecaleni: Nam ndinetyala! Bendiqala ukurhuqa iinyawo zam kangangeminyaka ndisakha iphepha elizinikeleyo kwindawo yethu yenkampani malunga nokuthetha kwam… kodwa eli cebo likaAndrew liyandikhuthaza ukuba ndigqibe!
tags: Ngammalunga nephephaAndrew ubulumkoukutshatyalaliswa komntuiphepha lomntu
I-3D yokuPrinta iTekhnoloji iya kuliguqula njani ikamva lethu
Epreli 22, 2016 ngo-4: 25 PM
Ezi zizinto ezintle.
Abo bathandabuzayo malunga nokuveza izinto abazithandayo kunye nezinto abanomdla kuzo kuba bengafuni ukubonakala bengenabuchule, nditsho oku:
Ayisiyo malunga nobuchwephesha malunga neqela, amandla angaphandle kweqela.
Ukuba umfundi wakho ujonga ukungabikho kwiqela labo baya kuba nembono eyoyikisayo kuwe.
Ngokutyhila amasuntswana ngobomi bakho, njengokufumana abantwana, ukubaleka, ukuthanda kwakho ukutya kwaseMexico uya kushukuma ungene kwiqela labantu apho abantu baya kukubona ngokukhanya okuhle.
Kufana nefuthe le-halo.
Epreli 25, 2016 ngo-4: 59 AM
Ngokoluvo lwam esona sisombululo kukuzibonakalisa njengomntu othembekileyo. Abantu bayathanda ukwenza ishishini ngobuchule, inkcubeko kunye nosomashishini othembekileyo.
Ndivale uninzi lweentengiso ngokusekwe kunxibelelwano olusekwe ekwabelaneni ngokutya endikuthandayo kunye nabathengi abanokubakho.